Uhlaziya njani ku-Ubuntu 18.10 ukusuka kwi-Ubuntu 18.04 LTS? | Ubunlog
Uhlaziya njani ku-Ubuntu 18.10 ukusuka kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Kulungile njenge okhankanywe kwinqaku elidlulileyo ngoku iyafumaneka ukukhuphela ingxelo entsha Ubuntu 18.10, nangona kwabo basebenzisa Ubuntu 18.04 LTS banokwenza ukutsiba kuhlobo olulandelayo ngaphandle kokufaka kwakhona.
Ngale nto ukhetho kubasebenzisi be-Ubuntu 18.04 LTS ukwenza utsiba olandelayo ufumana ukhetho lokukhusela zonke iisetingi zomsebenzisi kunye neefayile ezibalulekileyo ezifumaneka ngaphakathi kwenkqubo.
Ngokufanayo Ngaphambi kokuba ndiqale le nkqubo kufuneka ndilumkise ukwenza utshintsho kwinguqulelo ye-LTS ukuya kwinguqulelo eqhelekileyo kuthintela ukuba ube nenkxaso yeenyanga ezili-9 ngaphambi kokuba iyeke ukuba nenkxaso.
Kwelinye icala, esona sincinci esinconywayo kuba iinguqulelo ze-xx.10 zisebenza njengesiseko sokuphucula kunye nokupolisha iinguqulelo ze-xx.04 ezinokuzinza kunye nenkxaso-
Okokugqibela, nangona oku kuthathwa njengenkqubo ekhuselekileyo, akukho nto ikuxelela ukuba kukho into eyenzekayo ngeli xesha ukuba ikhokelela ekulahlekelweni kwedatha okanye kwinkqubo iyonke luxanduva lwakho.
Kungenxa yoko le nto ngaphambi kokwenza oku kuhlala kucetyiswa ukuba wenze ukhuphelo lwenkcukacha zakho ezibalulekileyo ngalo lonke ixesha.
Ukwazi oko, Landela le miyalelo ingezantsi ukuphucula Ubuntu 18.10 ukusuka Ubuntu 18.04 LTS.
1 Ukuphucula inkqubo ukusuka kwi-Ubuntu 18.04 LTS ukuya kwi-Ubuntu 18.10
1.1 Kufakwe uhlobo olutsha lwe-Ubuntu 18.10
Ukuphucula inkqubo ukusuka kwi-Ubuntu 18.04 LTS ukuya kwi-Ubuntu 18.10
Ngaphambi kokuqala nayiphi na inkqubo yokuhlaziya, Nceda wenze ezi nkqubo zilandelayo ukunqanda iingxaki ngexesha lenkqubo.
Susa abaqhubi bepropathi kwaye usebenzise abaqhubi bemithombo evulekile
Khubaza zonke izinto zokugcina umntu wesithathu
Ukuthintela inani elikhulu leempazamo kunye nokumiswa kofakelo, khubaza zonke izinto zokugcina umntu wesithathu.
Unokwenza ugcino lwazo ngezixhobo esele zikhankanyiwe apha kwibhlog.
Kubaluleke kakhulu ukuba senze uhlengahlengiso kwizixhobo zethuNgenxa yoku kufuneka siye kwi "Software kunye nohlaziyo" esiya kuthi siziphande kwimenyu yezicelo zethu.
Kwifestile evuliweyo, kufuneka siye kuHlaziyo tab, phakathi kokukhetha esikubonisayo ku "Ndazise ngenguqulelo entsha yoBuntu" apha siza kukhetha ukhetho olusinika lona njenge "Nantoni na entsha uhlobo ".
Ekugqibeleni, Kuya kufuneka simisele inkqubo ukukhangela kwaye silumkise ukuba kukho inguqulelo entsha. Ukufezekisa oku, kwanele ukuba sivule i-terminal kwaye kuyo sichwetheze le miyalelo ilandelayo:
Yenza le nto Siza kuqala inkqubo kwakhona, ngale nto siza kuqinisekisa ukuba sinezona phakheji zangoku kwinkqubo kwaye uphephe iingxaki ezinokubakho.
Kufakwe uhlobo olutsha lwe-Ubuntu 18.10
Emva kokuba inkqubo iqale kwakhona, xa ungena ungene ngaphakathi, uya kuthi uxelelwe ukuba uhlobo olutsha lwe-Ubuntu luyafumaneka, vula itheminali kwaye uthayiphe:
Ngoku Kufuneka nje nqakraza kwiqhosha «Ewe, hlaziya ngoku» kwaye emva koko siya kucelwa ukuba singenise igama eligqithisiweyo ukugunyazisa uhlaziyo.
Ngoku ukuba oku akwenzanga ukuba isaziso sokuhlaziya sivele. Singayinyanzela le nkqubo, Ngale nto siza kuvula i-terminal nge-Ctrl + Alt + T kwaye kuyo siza kwenza lo myalelo ulandelayo:
Lo myalelo uya kukunceda ngokusisiseko ukuvula isixhobo esihlaziyiweyo esiya kuthi xa sivulwa sinyanzelwe ukuba siqwalasele ukuba ngaba kukho ingxelo ephezulu kunale uyisebenzisayo.
Le nkqubo ifuna ukukhuphela i-1GB okanye iiphakheji ezingaphezulu kwaye ithatha ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-2 okanye ngaphezulu ukuyicwangcisa. Ke ngoko, kuya kufuneka ulinde ukuba inkqubo igqitywe.
Ekupheleni kwale nkqubo, ukuba yonke into ibisenziwa rhoqo, kuya kufuneka wazi ukuba kukho iipakeji ezingasasebenziyo ngohlaziyo, ke uya kwaziswa kwaye ungakhetha phakathi ko "Gcina" kunye no "Cima", ukhetho lokugqibela lube kucetyiswa kakhulu
Ekugqibeleni, Inyathelo lokugqibela ekufuneka silithathile kukuyiqala ngokutsha inkqubo yethu, ukuze lonke utshintsho olusetyenzisiweyo lulayishwe ekuqaleni kwenkqubo kunye neKernel entsha ebandakanya olu hlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Uhlaziya njani ku-Ubuntu 18.10 ukusuka kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Ingxaki kukuba i-PC yam yamkela kuphela iinkqubo ezingama-32-bit, ke ndinokuhlala ne-Ubuntu 16.04 LTS ngoku. Inguqulelo 18 endiyaziyo yeyama-bits angama-64 kuphela. Ndiyathemba ukuba iinguqu ezingama-32 azihambi.
UJavier Gonzalez sitsho
Uhlaziyo luphume ngokuzenzekelayo, kwaye xa ndiqala ngalo ndifumana windows endazisa ngeempazamo ... andinalo ulwazi lwe-linux, ke andazi ukuba ndenzeni ...
(1) Ukuphucula impazamo ukusuka ku-Ubuntu 18.04 ukuya ku-Ubuntu 18.10
Ayikwazi ukufaka "libc-bin"
Iwindow indazisa ukuba: Uhlaziyo luyaqhubeka, kodwa iphakheji "libc-bin" ayinakuba kwimeko yokusebenza. Cinga ngokungenisa ingxelo yegciwane malunga noku.
Ifakelwe libc-bin iphakheji emva kofakelo lweskripthi sokubuyisela impazamo kwimeko yokuphuma kwempazamo 135
(2) Ayikwazanga ukufaka uhlaziyo
Uhlaziyo lurhoxisiwe. Inkqubo yakho inokuba ishiywe ikwimeko engenakusebenziseka. Ukubuyiselwa kwakhona kuya kwenzeka (dpkg -configure -a).
Phendula kuJavier Gonzalez
(3) Ukuphucula akuphelelanga
Ukuhlaziywa kugqityiwe ngokuyinxenye kodwa bekukho iimpazamo ngexesha lenkqubo yokuphucula.
Molo, ndifumana uhlaziyo, ndibeka uhlaziyo kwaye iwindow iyavala kwaye akukho nto yenzekayo
Okwangoku kufuneka silinde kuba uhlaziyo lusanda kukhutshwa kwaye ke iiseva zinokugcwala.
Andazi ukuba, emva kokuqalisa kwakhona, ndihlaziya kwakhona kwaye sele ndinobuntu 18.10 ...
Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela…
Into endiyibonayo ukuba Ubuntu ayikho iyakususa ukubonakala kunye nezithunzi zeefestile kungekuphela kuba ndingayithandi kodwa kuba inika ukusebenza ngakumbi. Ngaba ikhona indlela?
UJosué Cavalheiro Schipper sitsho
Ndisandula ukufaka i-lubuntu 18.10 ndithanda kakhulu i-interface entsha
Phendula kuJosué Cavalheiro Schipper
Khangela iiphakheji ezifumanekayo kwisiphelo sendlela Ubuntu kunye neziphumo
Inguqulelo entsha ye-Ubuntu 18.10 ngoku iyafumaneka